Isicatshulwa segqabi le-mulberry sisicatshulwa esimanzi okanye isicatshulwa se-ethanol kumagqabi omisiweyo eMrusalbal., Equkethe i-flavonoids, i-alkaloids, i-polysaccharides njl njl. Kubonakaliswe ukunceda kwiingxaki ezininzi ezisempilweni. Ngoku isicatshulwa segqabi le-Mulberry sisetyenziswa ngokubanzi kukutya, amayeza, ukutya kwezilwanyana, iimveliso zobuhle njalo njalo.
I-flavonoids, i-phenols, ii-amino acid njlnjl.
Isicatshulwa segqabi le-mulberry sinokuwenza ungasebenzi umsebenzi we-elastase kwaye sisebenza ukuvuselela ulusu; inokukhuthaza umsebenzi we-enzyme yasimahla yokuqhekeza kwaye ibhloke into emdaka kwizicwili ukunceda ukubuyisa ixesha lokuguga. Ukuqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqha kwe-Mulberry kwegqabi kunokubangela ukungalingani kwe-superoxide anion radicals simahla ukuvelisa ioksijini ye-molekyuli kunye ne-hydrogen peroxide, enokukhuthaza imisebenzi yokuqhekeza simahla kunye nokukhusela umzimba kumonakalo weeradicals zasimahla.
Isicatshulwa segqabi le-mulberry sinokuphucula ukuhlanganiswa kwe-ceramide kwi-fibroblast kwaye senze ulusu lwakho luzive luthambile; iluncedo kwi-acne ebangelwa yi-androgen kwicala eliphezulu; iyanceda ukunxibelelana nemicu ye-collagen kwaye isetyenziselwe ukunciphisa ubunzima; Ukukhupha igqabi le-mulberry kunokuyekisa umsebenzi we-tyrosinase, kunciphise ukwakheka kwe-melanin, kuphuculwe ukusebenza komzimba wesikhumba, kwaye kunempumelelo yokwenza mhlophe kunye nokulwa amabala.